Kitra any Eoropa: tsy ankatoavin’ny Fifa ny «Super ligue» | NewsMada
Kitra any Eoropa: tsy ankatoavin’ny Fifa ny «Super ligue»
Misavoritaka amin’izao fotoana izao ny tontolon’ny baolina kitra ao Eoropa noho ny fikasan’ireo klioba sasany hanatanteraka ny “Super ligue”. Tsy mankato izany ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) ary mampitandrina ireo ekipa handray anjara.
Nilaza i Gianni Infantino, filohan’ny federasiona baolina kitra iraisam-pirenena (Fifa), nandritra ny fanokafana ny semineran’ny Firaisamben’ny baolina kitra eoropeanina (Uefa), omaly, fa tsy mankato ary manohitra tanteraka ny fananganana ny “Super ligue”. Tsy misy fisalasalana, hoy izy, fa hizaka ny vokany ireo klioba sy ireo mpilalao rehetra hifaninana amin’izany. Nampitandrina mafy ny tenany fa tsy ho afaka intsony handray anjara amin’ny fifaninanam-pirenena na iraisam-pirenena izay mandray anjara amin’io “Super ligue” io.
Nomarihiny fa te hisongona na haka ny toeran’ny “Ligue des champions” io tetikasa “Super ligue” io. «Na ianareo ao anatiny, na ianareo ety ivelany fa tsy afaka manao antsasany ao anatiny ary antsasany eny ivelany”, hoy ny filohan’ny Fifa.
Raha tsiahivina, anisan’ireo nanangana ity “Super ligue” ity i Florentino Perez, filohan’ny klioba Real Madrid, nanambara fa hanavotra ny baolina kitra eoropeanina. Miaraka aminy amin’ity tetikasa vaovao ity ireo klioba 12 goavana toa ny Real Madrid sy ny FC Barcelone ary ny Atlético de Madrid, ho an’ny Espaniola. Ny Juventus Turin, ny AC Milan, ny Inter Milan ny an’ny Italianina ary miisa enina kosa ny an’ny Anglisy: ny Liverpool, ny Manchester United, ny Manchester City, ny Chelsea, ny Tottenham ary ny Arsenal.
Tsy misy ekipa frantsay sy alemà ary portiogey sy holandey amin’ity “Super ligue” ity. Nankasitraka ny fanapahan-kevitr’ireo ekipa frantsay ny amin’ny tsy handraisan’izy ireo anjara amin’ity “Super ligue” ity i Emmanuel Macron, filoham-pireneny.
Ahina tsy ho afaka hiatrika ny manasa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, hotanterahina ny 27 sy ny 28 avrily ho avy izao, izany ny Real de Madrid sy ny Chelsea ary ny Manchester City.